ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် အမှတ်တရ နေအိမ်ပြတိုက် ဒဂုံအရှေ့တွင် ဖွင့်လှစ် - Yangon Media Group
စတင်ဖွင့် လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သော ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်အိမ်တွင်ထားရှိနိုင်ရေးအတွက် ၄င်း၏ အမှတ်တရပစ္စည်း ရရှိထားသူများ လာရောက်လှူဒါန်း ကြရန် နှိုးဆော်လိုက်သည်။ ”အဘရဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်း တွေရှိတဲ့ သူတွေကလည်း အိမ်မှာထားရှိပြသနိုင်ဖို့ လာပို့ဆောင် ပေးနိုင်တယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင် အမှတ်တရနေအိမ် ဖြစ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကပြောသည်။
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် နောက်ဆုံးနေထိုင်ခဲ့သည့် ကျောက်ကုန်း နေအိမ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်တည် ဆောက်ပြီးဖြစ်၍ ဧပြီ ၂၁ ရက်တွင် ဦးဝင်းတင်အိမ် (U Win Tin-House)အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ (၁၁)ရပ်ကွက် ဟိုင်ဆင်ဒူးဝါးလမ်း NLD AIDS Center (NAC) ဝင်းအတွင်း ပြတိုက်ကဲ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးဝင်းတင် အမှတ်တရ နေအိမ်ဖြစ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက ပြောသည်။
”နိုင်ငံတကာမှာကတော့ အခုလိုပဲ နိုင်ငံရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနုပညာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂီတနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုလိုပညာရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမှတ်တရ လေးတွေထားပြီးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ သူတွေအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကလူတွေလာပြီး တော့လေ့လာနိုင်တဲ့ နေရာလေး တွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ဘယ်နေရာကိုသွားသွား ကျွန်မတို့ လေ့လာလို့ မကုန်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ကျန်ခဲ့တဲ့ နောင်လာနောက်သား တွေ နိုင်ငံတကာကပဲပြောပြော၊ ပြည်တွင်းကပဲပြောပြော လေ့လာစရာရှိတယ်။ ကိုယ်လေ့လာပြီးလို့ ရှိရင် ဘာတွေရှေ့ဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေ၊ အသိတွေ ပေး ခဲ့နိုင်မယ်”ဟု ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကျေးဇူးရှိခဲ့ ဖူးသူများမှာ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် အပါအဝင် အများအပြားရှိကာ ယင်းတို့ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ”လူတစ်ယောက် အကြောင်းကို ပြန်ပြောကြတဲ့အခါမှာ သူသုံးခဲ့တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေက သူ့ရဲ့ခြိုးခြံချွေတာမှု ရောင့်ရဲမှုကို ပြကြပါတယ်”ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်ကဆိုသည်။ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ”ဦးဝင်းတင်၏ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ” အဖွဲ့ဝင်များအား ဖိတ်ကြား၍လည်း ဦးဝင်းတင်အိမ် (U Win Tin-House)ဆက်လက်ထိန်း သိမ်းရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မည်ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းတို့ကပြောသည်။
လတ်တလောတွင် စုဆောင်း ရရှိထားသော ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် မကွယ်လွန်မီ အသုံးပြုခဲ့သည့် ပစ္စည်းတချို့ဖြင့် မူလအတိုင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားပြီး အမှတ်တရ ပစ္စည်းတချို့ကျန်ရှိ နေသေးကြောင်း ဦးဝင်းတင် အမှတ်တရ နေအိမ်ဖြစ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက ပြောသည်။ ဦးဝင်းတင်အိမ် (U Win Tin-House) ဖွင့်ပွဲကို ဟံသာဝတီဦးဝင်တင် ကွယ်လွန်ခြင်း ငါးနှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦး မောင်မောင်စိုး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။
မွန်ပြည်နယ် စသုံးလုံး ညွှန်မှူးအိမ် ဖောက်ထွင်းသွားသူကို ဖမ်းဆီးရမိ
မနောအလှ အနုပညာရှင်များ ပရဟိတအဖွဲ့၏ အနုပညာ ဖျော်ဖြေပွဲကြီး ပြုလုပ်မည် ရရှိသော ငွေကြေးများက??
ဗန်းမော်မြို့နယ် ရွာဦးပြင် ရိုးရာနတ်ဓလေ့ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပ
ကျိုင်းတုံတွင် ဆယ်တန်းကျောင်းသူအား အဓမ္မကျင့် သတ်ဖြတ်ပြီး မီးရှို့အလောင်းဖျောက်သူ နှစ်ဦး??